ဒီဇင်ဘာ ပိတ်ရက်မှာဖတ်ဖို့စာအုပ်များ | Weenyinthit Bookshelf
ဒီဇင်ဘာမှာ ကျောင်းတွေပိတ် အလုပ်တွေပိတ်ဆိုတော့ အိမ်မှာထိုင်ပြီး စာအုပ်လေးနဲ့ နှပ်နေချင်တဲ့သူတွေဖို့ စာအုပ်လေးတွေရှာပြီး ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပိတ်ရက်ရှည်မှာ အေးအေးဆေးဆေးဖတ်ရတာပေါ့ဗျာ။ ဒီဇင်ဘာမှာ သူများတွေတော့ ဘာလုပ်မယ်မှန်းမသိဘူး ကျွန်တော်ကတော့ ကျောင်းပိတ်တာနဲ့ ကွန်ပြူတာရှေ့ထိုင်ြ့ပီး စာကြည့်တိုက်လေးကို စာအုပ်တွေထပ်ဖြည့်ရအုန်းမှာပဲ။
ဒီနေ့တော့ ခေါင်းစဉ်အလိုက်မလုပ်ပဲ .. ရှိတဲ့စာအုပ်တွေကို တန်းစီပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ ကြိက်နှစ်သက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ရှားရှားပါးပါး ဦးသုခစာအုပ်တစ်အုပ်လည်း ပါပါသေးတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ်တင်ရင် အမျိုးသမီးစာအုပ်များနဲ့ သိုင်းဝတ္ထုများကို တင်ပေးသွားပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဇင်ဘာလဆန်းပိုင်း ဖိုင်နယ်စာမေးပွဲတွေရှိတာကြောင့် စာအုပ်များကို ဒီဇင်ဘာလလယ်လောက်မှ တင်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
စာအုပ်များကို ပေးပို့လိုသူများကိုပြောချင်တာကတော့ စာအုပ်များကို upload site တစ်ခုမှတင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ စာရေးဆရာနာမည်ရဲ့ တော့ပစ်အောက်မှာcomment အနေနဲ့ ပိုစ့်လုပ်သွားပေးလိုက်ပါ. အဲဒါဆိုရင် ကျွန်တော်အချိန်မရလို့ မတင်ပေးဖြစ်ရင်လည်း အခြားစာဖတ်သူတွေအနေနဲ့ ဒေါင်းလုပ်ချပြီး ဖတ်နိုင်တာပေါ့ အကယ်လို့တော့ပစ်မရှိဘူး ဆိုရင်လည်း ဒီတော့ပစ်အောက်မှာ တင်ပေးသွားနိုင်ပါတယ်။ နဂိုအတိုင်းလည်း weenyinthit@gmail.com ကနေလည်း လက်ခံနေပါတယ်။
ဇ၀န – ရေစက် (Nov 28, 2008)
ဇ၀န – ကျွန်တော်လင် (Nov 28, 2008)
အမျိုးသမီးစာအုပ်များWeenyinthit Bookshelf › Edit — WordPress
စိုးမြတ်သူဇာ – အနားသတ်သစ္စာ (Nov 28,2008)
လမင်းမို့မို့ – မောင် (Nov 28, 2008)
နုနုရည်(အင်းဝ) – ပြုံး၍လည်းကန့်တော့ခံတော်မူပါ ရယ်၍လည်းကန်တော့ခံတော်မူပါ (Nov 28, 2009)
တင်အောင်နီ – ပြာဂလောင် ပြာလချောင် – ကံကောင်းလို့
မန်းတင် – ဂျူးလိယက်ဆီဇာ (Nov 28, 2008)
8 Responses to “ဒီဇင်ဘာ ပိတ်ရက်မှာဖတ်ဖို့စာအုပ်များ”
stoo says:	December 8, 2008 at 10:54 pm	hi admin.
i wanna share one of shwe o daun’s book which is not in this book list, may i know how can i share my books Reply	weenyinthit says:	December 11, 2008 at 9:11 am	I am really sorry for my late reply. U can share in2ways..
first is upload in other uploading site and leave download link asacomments under Sayar Shwe Oo Doung novels post. So other user can see u r book too ..
2nd way is just email me at weenyinthit@gmail.com. I will upload u r book after Dec 20, 2008 coz I have final exam in these day ..
Thanks for helping me and sharing ebooks.
Reply	stoo says:	December 12, 2008 at 12:51 pm	Za wa na – car hte ka main kalay
za wa na – soe pay 1
za wa na – soe pay 2
za wa na – soe pay 3
sorry abt shwe oo daun book.. as tat book was damaged n can’t open.
here i shared some of za wa na books..
Reply	stoo says:	December 12, 2008 at 1:03 pm	Mahar Swe – Nar Khan Daw
Reply	admin says:	December 12, 2008 at 10:50 pm	Thanks Stoo … ..
Reply	သုထက်အောင် says:	May 25, 2009 at 2:21 pm	ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ဆရာ စံ-ဇာဏီဘို ရဲ့စာအုပ်နှစ်အုပ်ပါ
Reply	winmin says:	January 18, 2010 at 3:01 am	ဒေါက်တာနန်းဥမ္မာ – က္ကထ္တိယနဲ့ ဆေးပညာလိုချင်ပါတယ်
ဘယ်လို download ရမလဲ
Reply	moe says:	August 23, 2011 at 8:50 am	ဖွင့်ရင်ပြုတ်ပြုတ်ကျနေတယ်ကူညီပါဦး
့HELP ME !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!